Mpanamboatra sy mpanamboatra rotera tsara indrindra. GOJON
Ny fampifangaroana ny conveyor rotation sy ny rojo birao dia afaka mitondra mora foana ny horonan-taratasy mankany amin'ilay toerana ilaina, ary manana fahombiazana lehibe, izay mampihena be ny hamafin'ny asa sy mampitombo ny fahafaha-mihetsika amin'ny rafitra mpampita taratasy iray manontolo. Ny rafitry ny fitaterana taratasy mihantona dia tompon'andraikitra amin'ny fitaterana sy fitantanana ny taratasy ilaina amin'ny tsipika mitafo.
● firafitry ny firafitra: mpampita rojom-bozaka am-boalohany, rafitra miova ary rafitra (mampiasa rafitra fanamafisana mihodina);
● Rotary motera ： 1.1kw;
● Ferana mekanika sy fetran'ny herinaratra eo amin'ny frame ；
● Entana farany ambony: 3,5 taonina;
● Manangana andian-dahatsoratra Siemens, izay mampiasa programa data lozisialy fanodinana tsy miankina sy programa lozika hanohanana ny fanisam-hafainganam-pandeha haingam-pandeha, fampitana pulsa, DP bus, fifandraisana ethernet ary asa hafa;
● Manaiky ny fifehezana mandeha ho azy, miaraka amina fiovana mandeha ho azy / manual ary fiasa fanitsiana tena mihidy.
● Ny rafitra dia manana fijerena tena sy fiasan'ny fanairana diso; ny maodelin'ny CPU an'ny plc dia hanadihady ho azy ny fiasan'ny modely plc. Rehefa tsy mahomby ny fitaovana ao amin'ny rafitry ny mpampita mandritra ny fandidiana, ny rafitra dia hanome famantarana fampandrenesana maheno sy maso hampatsiahivana ny mpampiasa, ary ny antony mahatonga ny lesoka dia haseho eo noho eo amin'ny efijery fanairana amin'ny efijery mikasika, izay mety ho an'ny tenany manokana -mpiaraha-miasa amin'ny fikojakojana mpiasa. Ny fitaovana fijanonana vonjy maika, aorian'ny fanerena ny fijanonan'ny vonjy maika eo amin'ilay tranokala, dia mampifandray ny fizaran-tany lehibe mifanaraka amin'izany mba hahazoana antoka ny famokarana azo antoka.
● Ny rafitra dia manana asa fanaraha-maso lavitra, izay mitaky ny mpanjifa hanome ny tamba-jotra ivelany amin'ny kabinetra fanaraha-maso;
● Ampiasaina ho fampitana sy fihodinan'ny horonan-taratasy ；
● Fandidiana mandeha ho azy tsy misy olona.
Teo aloha: Chain board
Manaraka: Mpandefa Roller Drive
A3 Taratasy fampirimana, Masinina maranitra ho an'ny fonosana taratasy, Carte Conveyor, Roller Conveyor Systems, Efijery fiasan'ny atrikasa, Erp Banking,